Tunisiyaa eessa? – Gubirmans Publishing
Posted on February 3, 2011 by bgutema
Si’ana gurguddoon empayera Itiyophiyaa yaadaan walfakii Mallasaa akka Alii fi hoogganoota itt fincilame biraa roorisaa ta’ett Habashaan yoom ka’u jedhanii abjootu. Kun caalaa alati qiliwissaa jira. Gurguddoon sun ofii suduudaan bakka hin gubanne jiraataa biyyaan akka Afrikaa kaabaa ka’i jedhu. Ummati saanii tarii obbolaa saanii Kaaba Afrikaa jiran irra hala hamaa keessa jiru taha. Garuu gartokkon Wayyaaneen dira’inuma seetiin of xaxxee kuftii yoo eegan gara biraan fayyisooti saanii akkuma nugusa saanii dhumaa deebi’anii nu baraaru jedhanii abdatu. . Fakmishoon bulchoota habaqaluu kan yeroon itt darbe fakkaata. Balfii fi fincilli eegamuun, dhoowaa Tunisiyaa duras ture. Amma kan dibbee rukichiisuu fide maalii? Sanduqa irbaan ango Mallasaan dafqaa fi dhiigaan argate fudhachuu yaalanii dadhabani; ka’i ummataas yoo kan dur caalaa qophaawan tahe malee danqaraan sana gadii isa hin eegu.